LEGO မှဒစ်ဂျစ်တယ်ဒီဇိုင်နာ 4.3.10.0 အခမဲ့ DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
Lego မှဒစ်ဂျစ်တယ်ဒီဇိုင်နာ 4.3.10.0
သော့ Fnlaptop ကိုကီးဘုတ်၏အောက်ခြေတွင်တည်ရှိပြီး, သငျသညျဒုတိယ mode ကိုသော့ F1 ကို-F12 ၏နံပါတ်ကိုခေါ်ဆိုရန်လိုအပ်ပါတယ်။ လက်တော့ပ်ထုတ်လုပ်သူ၏နောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ် ပို. ပို. သည့်မာလ်တီမီဒီယာသော့က F-mode ကိုအခြေခံစေစတင်ခဲ့ကြသည်, သူတို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်လမျး၌သွားပြီနှင့် Fn နှင့်အတူနှိပ်သည့်တစ်ပြိုင်နက်လိုအပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ option ကိုမဆန့်ကျင်ပေါ်, အဆုံးစွန်သောအဘို့, အချို့သောအသုံးပြုသူများအတွက်အဆင်ပြေပုံရသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်တှငျကြှနျုပျတို့ကို enable သို့မဟုတ် disable လုပ်ဖို့ဘယ်လိုဆန်းစစ်ပါလိမ့်မယ် Fn.
laptop ကိုကီးဘုတ်ပေါ်က Fn ပေါ်နှင့်ပယ် switching
လက်ပ်တော့အသုံးပြုသောအရာများအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ် မူတည်. အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း F-keys ကိုတစ်အရေအတွက်, တစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာ activated ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုမှာလိုအပ် functional ဖြစ်စေသည့် F-keys ကိုနှင့်မာလ်တီမီဒီယာများ၏အခြားသောအဆင်ပြေ mode ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်မှန်နှင့်အတူတိုက်ဆိုင်မဟုတ်တပ်မက်လိုချင်သောအခါ, က key ကိုနည်းလမ်းများပေါ်နှင့်ကို turn off ဖို့ဖြစ်နိုင် Fn ကာရလဒ်အဖြစ် F-keys ကိုတစ်ခုလုံးကိုအရေအတွက်။
Method ကို 1: Shortcut ကို
ဒီ option ကသော့၏ထိပ်တန်းအတွက်အလယ်တန်းချိန်း၏လက်တော့ထား၏လုပ်များနှင့်မော်ဒယ်ပေါ် မူတည်. ကတည်းကတစ်လောကလုံးမဟုတ်ပါဘူးကွဲပြားခြားနားပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေသူသည်စာဖတ်သူများအချို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်, သူတို့သည်တစ်ဦးထက်ပိုသောအလုပ်သမား-intensive နည်းလမ်းများပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Laptop ကိုသော့၏အထက်အကွာအဝေးပါစစ်ဆေးပါ။ / resolution ကိုအလုပ်ပိတ်ဆို့ခြင်းတစ်သော့ခတ်ထားတဲ့ icon လေးရှိလိုလျှင် Fnဒါကြောင့်သုံးစွဲဖို့ကြိုးစားပါ။ ဒီ icon ကိုမကြာခဏဖြစ်ပါသည် Escသို့သော်အခြားသောအရပ်၌ဖြစ်လိမ့်မည်။
ထို့အပြင်တခါတရံသော့ခတ်၏အစားအတွက်ကမ္ပည်းပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါသည် « FnLk » သို့မဟုတ် « FnLock »အောက်ကဥပမာထဲမှာရှိသကဲ့သို့။
သော့ကိုပေါင်းစပ်နှိပ်ပါ Fn + Escသော့ဖွင့်ဖို့ / အပိုဆောင်းသည့် F-စီးရီး၏စစ်ဆင်ရေး mode ကိုသော့ခတ်။
ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခု Lenovo ကလက်တော့ပ်, Dell, ASUS ကနှင့်အခြားသူများအချို့မော်ဒယ်များအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ခေတ်သစ် HP က, Acer ကဒါဘွား။ Interlock အတွက်များသောအားဖြင့်ပျက်ကွက်။
Method ကို 2: BIOS ကို setting များကို
သငျသညျရိုးရှင်းစွာတစ်ချိန်တည်းမှာ Fn Key ကိုပိတ်ပစ်ခြင်းမရှိဘဲ, မာလ်တီမီဒီယာသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်အပေါ် function ကိုအတူ F-key ကိုစစ်ဆင်ရေးကိုပြောင်းလဲလိုလျှင်အပြည့်အဝ BIOS ကိုရှေးခယျြစရာထိတွေ့ဆက်ဆံ။ အခုတော့အားလုံးနီးပါးမှတ်စုစာအုပ်လက်ျာဘက်ရှိအကူးအပြောင်းဖို့အခွင့်အလမ်းပေးသော, နှင့်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူပြီးနောက်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးမာလ်တီမီဒီယာ mode ကိုသုံးစွဲသူ Display ရဲ့ brightness, volume ပြန်ရစ်နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာထိန်းချုပ်နိုင်သည်မထွက်ရ, activated ဖြစ်ပါတယ်။
, BIOS မှတဆင့် F-keys ရဲ့ mode ကိုပြောင်းမည်သို့အသုံးချပါကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလင့်ခ်ပစ္စည်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ်: တစ်လက်ပ်တော့အပေါ် F1 ကို-F12 key တွေကို enable လုပ်ဖို့
Method ကို 3: Driver ကို Download လုပ်ပါ
အလုပ် Fn နှင့် F-စီးရီးမှဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်ကဒါပမေဲ့အံ့သွအလုံအလောက်, တာဝန်ရှိယာဉ်မောင်းသည်။ ယင်း၏မရှိခြင်းအတွက်တစ်အသုံးပြုသူ Laptop ကိုထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ သွား. နှင့်ထောက်ခံမှုအပိုင်းတိုင်ပင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ မည်သည့်ယာဉ်မောင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ရှိရာအများအားဖြင့်, ထိုပါပဲ။
ယင်းနောက်ပူသော့၏စစ်ဆင်ရေးများအတွက်တာဝန်ရှိ Windows ကိုသင့်ရဲ့ဗားရှင်း (7, 8, 10) (ကော်မာကွဲကွာ, သူတို့ကစာရင်းပြုစုထားလျှင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာရင်းထဲတွင်သို့မဟုတ်မျိုးစုံအစီအစဉ်များ) program တစ်ခုကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါတယ်များအတွက်ယာဉ်မောင်းများ၏စာရင်းထဲက။ ဒါဟာ / သူတို့သာမဆိုတခြားဆော့ဗ်ဝဲကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးတူသော install နိုင်သည်
HP က - « HP ကဆော့ဝဲမူဘောင်», « HP က on-screen Display ကို», « HP က Quick Launch », « HP ကညျ့ဝ Extensible Firmware Interface (UEFI) »။ တိကျတဲ့လက်ပ်တော့မော်ဒယ်များဘို့တချို့က applications များပျက်ကွက်နိုင်ပါတယ်;
ASUS က - « ATKPackage »;
Acer - « Launch Manager ကို»;
Lenovo က - « Lenovo ကစွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲမှု» / « Lenovo ကပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှု» (သို့မဟုတ် « Lenovo ကမြင်ကွင်းပေါ်ရှိ Display ကို Utility ကို», « Advanced Configuration နှင့်ပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှု Interface (ACPI) ယာဉ်မောင်း»);
Dell - « Dell ကအမြန်ဆက်တင်များလျှောက်လွှာ» (သို့မဟုတ် « Dell ကပါဝါ Manager ကို Lite ကိုလျှောက်လွှာ» / «ဒဲလ်ဖောင်ဒေးရှင်းကန်ဆောင်မှုများ - လျှောက်လွှာ» / « Dell ကရာထူးအမည်သော့ချက်များ»);
Sony က - « Sony က Firmware တိုးချဲ့မှု Parser ယာဉ်မောင်း», « Sony က Shared စာကြည့်တိုက်», « Sony က Notebook အသုံးအဆောင်များ» (သို့မဟုတ် « Vaio Control Center ကို») ။ အချို့မော်ဒယ်များအတွက်ရရှိနိုင်ယာဉ်မောင်းများ၏စာရင်းလျော့နည်းလိမ့်မည်
samsung - «လွယ်ကူပြရန် Manager ကို»;
Toshiba - « hotkey Utility ကို».
အခုဆိုရင်သင်အလုပ် enable သို့မဟုတ် disable နိုင်ပါတယ်မသာသိ Fnဒါပေမယ့်လည်းက F-keys ကို, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့ function key ကိုတစ်ခုလုံးကိုစီးရီး၏စစ်ဆင်ရေး၏ mode ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်။
ဗီဒီယို Watch: Tester dulu , gacor rupanya bahaya!!!! (မေ 2019).